Warshad Bacda Aan Xidhnayn | Shiinaha Non-xidhkii Bag Bag-saareyaasha, shirkado cusub
Waxaan ka shaqeyneynaa mustaqbal wanaagsan iyo adduun deegaanka ku habboon. Sababtaas awgeed, waxaan soo saaraynaa bey'ad-saaxiibtinimo iyo% 100 boorsooyin dib loo isticmaali karo. Xalalka ugu fiican ee boorsooyinka wax lagu iibsado ama bacaha tote waa bacaha aan tolmo lahayn, pp bacaha la tolay, iyo bacaha cudbiga ah. Waxaan nahay soo saare boorsada nonwoven bac, Xiinka bacaha aan xirxirnayn, pp bacaha leh tolmo wanaagsan, bacaha cudbiga, s, iyo bacaha shiraacyada kuwaas oo u isticmaalaya sidii kiishka wax lagu gado, bacaha bey'ada u fiican, bacaha xayeysiinta, bacda suuqa, s, iyo tote bacaha;
Waxaan dooneynaa inaan u hurno sidii aan ugu soo bandhigi laheyn dukaameeyaasheena sharafta leh khubarada sida xamaasada leh u fekeraya ee loogu talagalay Xirmooyinka Xirfadlayaasha Aan Xidhnayn ee Xirfadlayaasha ah, Waxaan soo dhaweyneynaa macaamiisha, ururada ganacsiga iyo saaxiibbada dhow ee dhammaan qeybaha adduunka si ay noola soo xiriiraan oo ay u codsadaan iskaashiga abaalmarinta labada dhinac.
Bag aan tolmo wanaagsan leh oo Nonwoven Bag Shopping Manufacturer ka Shiinaha
Xaraashka wax iibsiga kartoo ee loo yaqaan 'ultrasonic PLA Non Bag Bag'
Custom dahaaray Polypropylene kubado Bag PP Non-xidhkii Bag
Bacriminta tayo jumlada tayo sare leh bac aan dunta leh tolmo wanaagsan